Qalbi Dhagax oo la Shaaciyay cida dhiibtay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Qalbi Dhagax oo la Shaaciyay cida dhiibtay
A warsame 18 November 2017 18 November 2017
Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeeshay xarunta golaha Shacabka, Ajandaha kulanka Baarlamaanka ayaana ahaa dhageysiga natiijada ay soo saareen Guddigii loo xil saaray Kiiska Dhiibistii Qalbi Dhagax
Guddigii loo xil saaray baaritaanka Dhibistii C/Kariin Qalbi Dhagax oo lagu wareejiyay dowlada Itoobiya ayaa Baarlamaanka u aqriyay natiijada kasoo baxday baaritaankii ay sameeyeen.
Waxa ay sheegeen Guddiga in Dhiibistii Qalbi Dhagax ay aheyd mid qalad ah , waxa ayna tilmaameen sharciga dalka u yaala in uusan dhigeyn in muwaadin Soomaaliyeed lagu wareejio dowlada kale.
Guddiga ayaa sheegay in Xukuumadda Somaliya ay ku qaldaneyd tallaabada ay ku dhiibtay C/kariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo Itoobiya loo gacan galiyay kadib markii Muqdisho laga dhoofiyay.
Guddiga Kiiska Qalbi Dhagax ayaa ku eedeeyay Hay’ada Nabad Sugida iyo Sirdoonka Qaranka si khaldan u maareeyeen arinta Qalbi Dhagax iyaga oon macluumaad sax ah aan siin Madaxda sare ee dalka.
Xildhibaanada Gollaha Shacabka ayaa ka dooday natiijada kasoo baxday baaritaanka Kiiska Qalbi Dhagax, waxa ayna inta badan Xildhibaanada sheegeen in ay khalad aheyd in Muwaadinkaas Soomaaliyeed Itoobiya loo gacan galiyo.
Ugu Dambeyn Xildhibaanada ayaa cod u qaaday natiijada baaritaanka waxaana taageeray Natiijada una codeeyay 152-Xildhibaan, waxaa diiday 6 Xildhibana halka ay ka aamuseen 3-Xildhibaan oo kale.
Maxaa Sabab U Ah Qaraxyada Ku Soo Laa Laabtay Magaalada Muqdisho